शीर्षकमा बाइबल पदहरू: परीक्षणहरू -> जीवन
 मेरा भाइहरू, हरप्रकारका जाँच आइपर्दा आनन्‍दित होओ। तिमीहरू जान्‍दछौ, जब तिमीहरूको विश्‍वासको जाँच हुन्‍छ, तिमीहरूको सहने शक्ति बढ्छ। तर कुनै कुरामा पनि नचुकी परिपक्‍व र सिद्ध हुन ती जाँचहरू सहँदै स्‍थिर भएर बस्‍न सिक्‍ने गर।
१ पत्रुस १:६
यी कुराहरूमा तिमीहरू आनन्‍द मनाउने गर। हुन त, अहिले तिमीहरूले थोरै समयको लागि थरीथरीका दु:ख भोग्‍नुपरेको छ।
जाँचको बेलामा टिक्‍न सक्‍ने मानिस नै धन्‍यको हो। दु:खमा स्‍थिर रहनेले नै परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको जीवनको मुकुट पाउनेछ।
यस जीवनमा हामीले भोगेका दु:खहरूलाई हामीमा पछि देखा पर्ने सुख सम्‍मान्‌सँग तुलना गर्न सकिन्‍न।
१ पत्रुस ४:१२
दु:ख-कष्‍टद्वारा तिमीहरूको जाँच भइरहेको छ तर यो कुनै नहुने कुरा भयो भनेर अचम्‍म नमान।
 सधैँभरि खुसी होओ। प्रार्थनामा लागिबस। जस्‍तोसुकै अवस्‍थामा जे परिआउँछ, ती सबैमा तिमी ख्रीष्‍टमा धन्‍यवादी होओ। ख्रीष्‍टमा भएर तिमीहरूले गर्नुपर्ने परमेश्‍वरको इच्‍छा यही हो।
तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा खराब जाल रच्‍यौ तर परमेश्‍वरले त्‍यसलाई भलाइमा बदल्‍नुभयो, जसले गर्दा उहाँले धेरै मानिसहरूको प्राण जोगाउनुभयो र आज तिनीहरू बाँचेका छन्।
आफ्‍ना दु:ख-कष्‍ट परमप्रभुकहाँ छोडिदेऊ र उहाँले सम्‍हाल्‍नुहुनेछ। उहाँले इमानदार मानिसहरूलाई हार्न दिनुहुन्‍न।
 परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “मेरा सोच-विचार तिमीहरूका जस्‍ता छैनन्, मेरा चाल तिमीहरूका भन्दा बेग्‍लै छन्। आकाश पृथ्‍वीभन्दा जति अग्‍लो छ, त्‍यत्ति नै तिमीहरूका भन्दा मेरा चाल र सोच-विचारहरू अग्‍ला छन्।
तर त्‍यो शिक्षाले तिनीहरूको भित्रसम्‍म जरा हाल्‍न नपाउनाले तिनीहरूले थोरै दिनसम्‍म मात्र विश्‍वास गर्छन्। यो शिक्षामा विश्‍वास गरेकोले दु:ख र खेदो आइपर्नेबित्तिकै तिनीहरूले त्‍यसलाई छोडिहाल्‍छन्।
अब के कुनै कुरोले हामीलाई ख्रीष्‍टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्‍छ? अहँ, कुनै पनि कुरोले हामीलाई ख्रीष्‍टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्‍दैन। हामीलाई दु:ख हुन सक्‍छ, कठिनाइ र खेदो आउन सक्‍छ, हामी नाङ्गो र भोकभोकै पनि हुनुपर्ला। हुन सक्‍छ, हामी त्‍यस्‍तै कुनै ठूलो आपत्‌मा परौंला वा मारियौंला पनि; तर के यी कुनै पनि कुराले हामीलाई ख्रीष्‍टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्‍छ? अहँ, कहिल्‍यै पनि सक्‍दैन।
१ पत्रुस 4:12-13
यसैकारण परमेश्‍वरको अधीनमा बस। शैतानको विरोध गर र त्‍यो तिमीहरूदेखि भाग्‍नेछ।
२ कोरिन्थी 1:3-4
 त्‍यति मात्र होइन, दु:खमा पनि हामी खुसी छौं किनभने दु:खले दु:ख सहने शक्ति दिन्‍छ, दु:ख सहने शक्तिले हामीलाई पाको बनाउँछ। हामी पाको भएपछि आउँदो समयको लागि साहस र आशा पाउँछौं।